ShweMinThar: February 2017
လူမေးများသော မေးခွန်း - Gym မကစားခင် အကြောလျှော့သင့်သလား ✅ or ❎
( Static stretching before lifting weight ??? )
မှတ်မှတ်ရရ " Gym မသွားမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း " ဆောင်းပါးမှာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် အကြောမလျှော့ပါနဲ့လို့ ရေးခဲ့ဖူးပြီး ဒီအချက်အပေါ် မေးခွန်းတော်တော် ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ သိပ်အရေးမကြီးဘူး၊ လူတွေ သိပ်မသိချင်လှဘူး ထင်ပြီး တိုတိုတုတ်တုတ် အကြော မလျှော့နဲ့ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ဘာ့ကြောင့် အကြောမလျှော့သင့်ဘူးလို့ ပြောသလဲ၊ ဘာတွေမကောင်းလို့လဲ၊ ဒါဆို ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အကျယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ တနည်းပြောရရင် သင့်ရဲ့ ဗဟုသုတကို Next level ရောက်အောင် သွားကျမယ် ဆိုပါစို့။
၁။ အကြောလျှော့ခြင်းနဲ့ သွေးပူလုပ်ခြင်းဟာ မတူပါဘူး
အကြောလျှော့ခြင်းဟာ အကြောတွေ ပြေလျော့သွားအောင် လုပ်တာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတစ်ခုကို သင်လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားထိ ဆွဲဆန့်မယ်၊ ပြီးရင် စက္ကန့် ၃၀-၆၀ အထိ အဲအတိုင်းနေပြီး ပြေလျော့အောင် လုပ်တာပေါ့။ ခြေထောက်ကို ထိုင်လျက်ဆန့်ထုတ်ပြီး ခေါင်းနဲ့ ဒူး ထိအောင်ကွေးတာမျိုးကို အကြောလျှော့တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါက မြန်မာ အခေါ်အရ ခေါ်တဲ့ အကြောလျှော့ခြင်း။
ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ရင်တော့ Static stretching (အငြိမ်နေပြီး အကြောလျှော့ခြင်း) ပေါ့။ Golden_Dreams မှာ အရင်ကရေးခဲ့တဲ့၊ မလုပ်သင့်ပါဘူးဆိုတဲ့ အကြောလျှော့ခြင်းဆိုတာ ဒီ Static stretching ကို ဆိုလိုပါတယ်။
သွေးပူလုပ်ခြင်းဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းအောင်၊ Body temperature မြင့်လာအောင် လုပ်တာပါ။ ခုန်ပေါက်တာ၊ Stair master လုပ်တာ၊ စက်ဘီးနင်းတာ၊ ပြေးစက်ပေါ် ခဏပြေးတာ စသဖြင့် လုပ်ရင် သွေးပူလာတယ်ဟုတ်။ ဒါမျိုးကို သွေးပူလို့ ခေါ်ပြီး အလေးမဆော့ခင် ၅-၁၀ မိနစ်လုပ်ခြင်းက ကောင်းမွန်ပါတယ်။
၂။ အလေးမဆော့ခင် အကြောလျှော့ခြင်းဟာ သွေးပူ မလာစေပါဘူး
Workout တစ်ခု၊ Exercise တစ်ခု စလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သွေးပူနေဖို့၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမြင့်နေဖို့၊ အသက်ရှူနှုန်းမြန်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှလဲ ကိုယ့်ကို စောင့်ကြိုနေတဲ့၊ ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့ အလေးတုံးတွေကို မဖို့၊ နောက်တစ်ဆင့်ထိ ခန္ဓာကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေမှာမလား။
ဒါဆို အကြောလျှော့လိုက်ရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲ။ အကြောလျှော့တယ်၊ Yoga လုပ်တယ်ဆိုတာ ကြွက်သားတွေကို ဆွဲဆန့်တာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးသွားမယ်၊ Body temperature ကျသွားမယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် သင်ဟာ Relax ဆိုတဲ့ အနေအထားတစ်ခုက်ု ရောက်သွားတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဒါကပဲ Workout မစခင် အကြောမလျှော့သင့်တာရဲ့ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်း မစခင် သင်ကြွက်သားတွေကို ပြင်ဆင်ထားချင်တာ Explosive ဖြစ်အောင်၊ Relax ဖြစ်နေအောင် မဟုတ်ပါ။
၃။ အကြောလျှော့ခြင်းက ကြွက်သားထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အားကို လျော့စေပါတယ်
သုတေသနပြုထားတာတွေ အများကြီးရှိတဲ့ အထဲက University of Milan မှာလုပ်တဲ့ သုတေသန တစ်ခု အဖြေနဲ့စပါရစေ။
အဲ တက္ကသိုလ်မှာ လူ ၁၇ ယောက်ကို ၂ ရက်ခွဲပြီး သုတေသန လုပ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ရက်မှာ အကြောမလျှော့ပဲ သွေးပူပဲ လုပ်ပြီး Workout လုပ်။ ဒုတိယ တစ်ရက်မှာတော့ သွေးပူမလုပ်၊ အကြောပဲလျှော့ပြီး Workout လုပ်ပေါ့။ လုပ်တဲ့ Workout က အလေးဆော့တာရယ်၊ အမြင့်ခုန်တာရယ်ပါ။
ဒီမှာတွေ့ရတာ သွေးပူလုပ်တဲ့နေ့ ( အကြောမလျှော့)မှာ ပိုပြီး အမြင့်ခုန်နိုင်သလို၊ ပိုပြီးလဲ လေးလံတာ ဆော့နိုင်ပါတယ်တဲ့။
တွေ့ရှိချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ သီအိုရီနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ပထမ သီအိုရီက ကြွက်သားလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာ ကြွက်သားကို ကျုံ့သွားအောင် လုပ်တာပါ။ ကြွက်သားတွေကို အကြောလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာ ပြန်ကျုံ့ဖို့ လုပ်ဖို့ ပိုခက်သွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလေးဆော့တဲ့အခါ (အလေးဆော့တာ ကျုံ့သွားအောင်လုပ်တာ) ထင်သလောက် မမ နိုင်တော့တာပါပဲတဲ့။
ဒုတိယ သီအိုရီကျ ကြွက်သားတွေမှာ ကျုံ့နေတဲ့ ပုံစံအနေအထားဆို သိုလှောင်ထားတဲ့ စွမ်းအင်ရှိပါတယ်။ ဒီစွမ်းအင်ကို Elastic energy လို့ သတ်မှတ်ပြီး အကြောလျှော့လိုက်ခြင်းက ကြွက်သားကို ဆွဲဆန့်လိုက်သလိုဖြစ်စေတာမလို့ စွမ်းအင် တစ်ချို့ ပျောက်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွယ်လွယ်နားလည်ချင်ရင် သားရေကွင်း တစ်ခုလိုပါပဲ။ လက်နဲ့ ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါ မူလပုံစံကို ပြန်ရောက်ဖို့ ရုန်းတဲ့အားပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆွဲဆန့်ပါများလို့ သားရေကွင်း ပြေလျော့သွားရင် အဲရုန်းကန်အားလည်း နည်းသွားလို့ သားရေကွင်း ပုံစပျက်လာတော့တာပါပဲ။
ဒီသီအိုရီဟာ အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့ အကြောလျှော့လိုက်ရင် Explosive ဖြစ်မှု လျော့သွားစေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ သွားကိုက်ညီပါလေရော။
Workout မလုပ်ခင် အကြောလျှော့ခြင်းဟာ အလေးမတဲ့ ခွန်အား၊ အမြင့်ခုန်တဲ့ ခွန်အား၊ အမြန်ပြေးတဲ့ အရည်အသွေး စတာတွေကို ကျစေတယ်၊ အပြည့်အဝ မရစေဘူးဆိုတဲ့ သုတေသန များစွာ အကြောင်း ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။ အဲတာတွေအစား အကြောလျှော့တာက မသင့်တော်ဘူးဆိုရင် Workout မလုပ်ခင် ဘာလုပ်တာက သင့်တော်သလဲ ပြောတာက ပိုအကျိုး ရှိမယ် မဟုတ်လား။
- Workout မလုပ်ခင်
သွေးပူလုပ်ပါ။ Dynamic stretching လို့ ခေါ်တဲ့ သွေးပူလုပ်နည်းဆိုတာက ကြွက်သားတစ်ခုကို အခေါက်ခေါက် အခါခါ အပေါ့စား လှုပ်ရှားတာပေါ့။
ဥပမာ ထိုင်ထ လုပ်မယ်ဆို အလေးမပါပဲ ထိုင်ထအရင်လုပ်တာ။ ခြေဘယ်ညာ ကွေးထိုင်တာ စသဖြင့် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရင်ဘတ်တွန်းမယ်ဆိုရင်လဲ အလေးတုံး ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ အကြိမ် ၂၀ လောက်တွန်းတာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပြေးစက်၊ လှေကားတက်စက်၊ စက်ဘီးနင်းစက်တွေမှာလဲ ၅မိနစ်ခန့် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းဟာ ကြွက်သားတွေကို နွေးထွေးလာစေနိုင်သလို နှလုံးခုန်နှုန်း၊ Body temperature တွေကိုလဲ မြင့်တက်လာစေတာမလို့ သင့်ကို လာမယ့် Main workout အတွက် Ready ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
- Workout လုပ်အပြီး
အကြောလျှော့ချင်သပါ့ ဆိုသူများအတွက် ဒီအချိန်ဟာ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ အကြောလျှော့ခြင်းဟာ Workout အတွင်း Stress များခဲ့တဲ့ သင့်ကြွက်သားတွေကို Relax အနေအထားကို ပြန်ရောက်စေတာမလို့ လုပ်ဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
Workout မလုပ်ခင် အကြောလျှော့သင့်တယ်ဆိုပြီး အသိများပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာ မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ပြောရတာလဲ ခပ်လန့်လန့်ရယ်ပါ။
အသစ်အဆန်းမလို့ လူကြိုက်အောင် ပေါက်ကရ လုပ်ပြန်ပြီ ထင်သူများလဲ ရှိနိုင်ပေမယ့် Golden_Dreams page အနေနဲ့ မသိသေးတဲ့ အချက်တွေ၊ အယူအဆအသစ်တွေ ဖတ်သူတွေ လက်ထဲရောက်အောင် ထည့်ပေးနိုင်ဖို့သာ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာ အယူအဆ ကွဲပြားတာတွေ ရှိတာမလို့ လုပ်တာမှန်တယ်၊ လုပ်တာမှားတယ်လို့ မပြောလိုပါ။
လက်တွေ့ကျသလား၊ မကျသလား သင်တို့ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့။
*** မကစားခင်​ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးသင့်ပြီး ကစားပြီးနောက် အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သင့်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Labels: ၀ိတ်ချနည်းများ, Lifestyle
ဘဲသားကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ - ရခိုင်မုန့်တီ - ကိုရီးယား တော့ပိုကီ
တော့ပူကီသည် ရေပန်းစားဆုံး ကိုရီးယားဟင်းလျာတွေထဲမှာ တမျိုးအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်မှုန့်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ တော့ပူကီကို အလွယ်တကူ လုပ်စားနိုင်မှာပါ။ အရသာကလည်း ချိုစပ်လေးနှင့် အလွန်မှ စားလို့ကောင်းပါတယ်။ လုပ်နည်းလေးကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
ဆန်ကိတ် (rice cake) ♦ ၅၀၀ ဂရမ်
ကိုရီးယား ငရုတ်သီးအနှစ် (hot pepper paste) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၈ဇွန်း
ငရုတ်သီးမှုန့် (hot pepper flake) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ငါးအသားချောင်း ♦ ၆ချောင်း (အပါးအစောင်းလှီးပါ)
သကြား (sugar) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ရေညှိရွက် ♦ ၂ရွက်
ကြက်သွန်နီ ♦၂လုံး (အ၀ိုင်းပါးပါးလှီးပါ)
Golden Drop နေကြာဆီ ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
မှတ်ချက်။ ။ ဆန်ကိတ် readymade ကို Market Place ဓမ္မစေတီ City Mart တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်..
၁။ အရင်ဆုံး ဒယ်ပူလာလျှင် Golden Drop နေကြာဆီ ထည့်ပေးပါ။
၂။ ပြီမှ ကြက်သွန်နီများကို မီးအတင့်သင့်ဖြင့် ၂မိနစ်ခန့် ကြော်ပေးပြီ ပြန်ဆယ်ထားပါ။
၁။ ပထမဆုံး ဒယ်အိုးတစ်ခုထဲသို့ ရေ(၁လီတာခွဲ) ထည့်ပြီ ဆူလာလျှင် ငါးခြောက်၊ ရေညှိရွက်များ ထည့်ပေးပြီ ၁၀မိနစ်ခန့် တည်ထားပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲသို့ ဆန်ကိတ် ထည့်ပြီ ၅မိနစ်ခန့် တည်ပေးပါ။
၄။ ပြီမှ (ငရုတ်သီးအနှစ်၊ သကြား၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ငါးအသားပြား၊ ငါးအသားချောင်း၊) တို့ကို ထည့်ပြီ ၂မိနစ်ခန့်တည်ပါ။
၄။ ထို့နောက် အပေါ်မှ နှမ်း၊ ကြက်သွန်မြိတ်များ ဖြူးပေးပါ။
Credit: ၀တ်​ရည်​ရဲ့ Page
မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာပွဲလမ်း များတွင် 'သင်္ကြန်' ပွဲတော်သည် ယဉ်ကျေးမှု၏ အထင်ကရအဓိက အမှတ်အသားစရိုက်လက္ခဏာကြီး ဖြစ်သည်။ တစ်လျှောက်လုံး 'မြန်မာ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအတာသင်္ကြန်' ဟု လေးနက်စွာ တခုတ်တရပြောဆိုသုံး နှုန်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မန္တလေးကဲ့သို့သော ကျန်ကောင်း ကျန်ရာမြန်မာ့ဓလေ့စရိုက်လက္ခဏာ အစုအဝေးတည်ရှိရာ မြို့ကြီး၏ သင်္ကြန်ပွဲတော်များတွင် ထိုအပြော အဆို၊ ထိုအသုံးအနှုန်း၊ ထိုအမူအ ကျင့်တို့ကို တစိုက်မတ်မတ်တစ် လျှောက်လုံး ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သည်။
မြို့လူထု သာမက(အထူးသဖြင့်) တာဝန်ရှိသူ များကလည်း (တာဝန်ရှိသည့်ပမာ) အထူးအလေးအနက်ထားခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တစ်လျှာက်လုံး 'မြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမန္တလေးမဟာ သင်္ကြန်' ဟု သုံးနှုန်းခဲ့ကြသည်။ သုံး နှုန်းသလိုလည်းလိုက်နာခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း သင်္ကြန်ရောက် သည်နှင့် မြန်မာဆန်ဆန်ယဉ်ကျေး စွာ ရေပက်ကစားခြင်း၊ ဂီတ၊ အက၊ အလှတို့ကို တစ်ဝကြီးခံစားလိုကြ ခြင်းဖြင့် 'မြန်မာသင်္ကြန်'၏ အမှတ် အသားတစ်ခုပမာ မန္တလေးသင်္ကြန် ကို ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပမှပါ အာရုံစိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသား ဝင်းဦးသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၁၉၇၈ ခုနှစ်အထိ ဆယ်နှစ်ကျော်ဆယ့်တစ် နှစ်ကာလမျှ မန္တလေးသင်္ကြန်တွင်ပါ ဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ဝင်းဦးသည် ထို စဉ်က နံပါတ်(၁)မင်းသားဟု ပြော ရလောက်အောင်လျှမ်းလျှမ်းတောက် နေသော ကာလလည်းဖြစ်ကာ မိန်း ကလေးပရိသတ်အများဆုံးရရှိထား သည်။ ဝင်းဦးသည် ရုပ်ရှင်မင်းသား သာမက စာရေးဆရာလည်းဖြစ်ကာ အထူးသဖြင့် နာမည်ကျော် အဆို တော်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးသင်္ကြန်သို့ ရုပ်ရှင်မင်း သားအဆိုတော်ဝင်းဦးဆယ်နှစ်ကျော် ကြာလာရောက်ခြင်းမှာ သိန်းဘယ် နှဆယ်နှင့်ငှားရမ်း၍သို့မဟုတ်ဘယ် သူဘယ်ဝါက စပွန်ဆာပေး၍ လာ ရောက်ခြင်းမဟုတ်။ ကိုယ်ကိုယ်နှိုက် ကအနုပညာအပေါ်နှစ်ယူခံစားလေး စားမြတ်နိုးလွန်း၍ 'အနုပညာ' များ အတောက်စား၊ အမြူးတူးဆုံး မန္တ လေးသင်္ကြန်တွင် ကိုယ်စရိတ်နှင့် ကိုယ်လာရောက်ကာ ဆင်နွှဲခြင်းဖြစ် သည်။ သည်နေရာတွင် အကြောင်း တိုက်ဆိုင်၍ပြောရလျှင် ရုပ်ရှင်မင်း သားဝင်းဦးက မန္တလေးသင်္ကြန်တွင် ကိုယ့်စရိတ်နှင့်ကိုယ်လာရောက်ကာ 'ဖျော်ဖြေ' ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးနှုန်း သော် ရုတ်တရက်ဆိုလျှင်လျော်ကန် သည်ဟု မှတ်ယူနိုင်၏။ သို့သော် မဟုတ်။
တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်မင်း သားဝင်းဦးက လာရောက်ဖျော်ဖြေ ခြင်းမဟုတ်။ မန္တလေးသူ၊ မန္တလေး သားတိုင်းတစ်ယောက်ချင်းစီ အသီး သီး အသက အသက မိမိတို့တတ် ကျွမ်းသော ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ အက၊ အဆို၊ အတီး၊ အနုသုခုမပညာကိုယ် စီဖြင့် မိမိဆန္ဒအလျောက်အမှီခိုကင်း စွာဖြင့် သင်္ကြန်တွင်ဆင်နွှဲကြသည့် နည်းတူ ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးက လည်း အများသူငါလိုဆင်နွှဲခြင်းဖြစ် သည်။ လာရောက်ဖျော်ဖြေခြင်းမ ဟုတ်။
ထို့ကြောင့် ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်း ဦးသီဆိုသလို မန္တလေးသူလေးတွေ ကပြသည်။ မန္တလေးသားများ အလှ ပြယာဉ်အသင်းအဖွဲ့တွေကလည်း ပြန်လည်သီဆိုတီးမှုတ်ကြသည်။ ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးအပါအဝင် သူ တို့သူတို့သီဆိုတီးမှုတ်ကပြကြသည့် သီချင်း၊ တီးလုံး၊ တီးကွက်တိုင်းက လည်း မန္တလေးသားတွေအားလုံး၏ အနုပညာပစ္စည်းချည်းပဲလေ။
သင်္ကြန်သည်မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်ကမျှ အပေါ်ဆီးဖြင့် သိမ်း ပိုက်ကာ ခံစားခြင်းမဟုတ်။ အသား ယူခြင်းမဟုတ်။ ဇိမ်ခံခြင်းမဟုတ်။ အဖျော်ဖြေခံခြင်းလည်းမဟုတ်။ ထို့ အတူ ဖျော်ဖြေခြင်းလည်းမဟုတ်။ ဝင်ခွင့်လက်မှတ်မရှိ။ VIP Rool မရှိ။ အသင်းဝင်ကတ်မရှိ။ အြေ>ွခအရံမရှိ။ ဆိုဖာခုံမရှိ။ အအေးဗူး သစ်သီးလင် ပန်းမရှိ။ သံဆူးကြိုးမရှိ၊ ကော်ဇောနီ မရှိ။ အားလုံးတန်းတူရည်တူ အနု ပညာတောက်စားမှု ...။ ပျော်ရွှင်မှု။
ရာချီသော ဧည့်ခံအလှပြမဏ္ဍပ်တွေ မြို့လုံးပတ်လည်ရှိသောကြောင့် မြို့လယ်လမ်းမကြီး တွေပေါ်မှာမဏ္ဍပ် များဆီ ကူးသန်းကြသည့် အလှပြ ယာဉ်ကြီးများ၊ သင်္ကြန်ပျော်ဂျစ်ကား များက ပျားပန်းခတ်မျှ ဥဒဟိုသွား လာနေကြသည်။လမ်းမကြီးတွေပေါ် သာမက လမ်းသွယ်၊ လမ်းကြားများ ထိ လျှပ်စစ်မီးတထိန်ထိန်၊ မီးစက် သံတညံညံနှင့်အလှပြယာဉ်ကြီးများ ဖြတ်သန်းသွားကြသလို ဘောနက် ဖုံးကို စည်းချက်ကျကျ ထုရိုက်သံနှင့် ဂျစ်ကားများကလည်း ဆူညံစွာအော် ဟစ်ရင်း အပြေးအလွှားမောင်းနှင် သွားကြသည်။
အထူးသဖြင့် ချစ်ပန်းနွယ်၊ ဈေး ချိုသူ၊ ဗဟိုမဏ္ဍပ်၊ နဂါးမယ်၊ အောင်မြေသူဇာစသည် မဏ္ဍပ်ကြီးများတစ် ဆက်တည်းရှိနေသော မြို့လယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမကြီးနှင့် ဈေးချိုသူ၊ မီးရထား၊ ဆောက်လုပ် ရေး၊ ငုရွှေဝါမဏ္ဍပ်များသို့ ဆက်စပ် သွားလာနိုင်သည့် အာဇာနည်လမ်း၊ ၇၈ လမ်းနှင့် လမ်း ၃ဝ မှာလည်း အလှပြယာဉ်တွေ၊ ဂျစ်ကားတွေ အ ကြားမလပ်မရှိ တေးသံမြိုင်မြိုင်နှင့် ဆက်စပ်သွားလာလျက်ရှိ၏။
ညာဉ့် ဦးယံ ၇ နာရီကျော်သည်နှင့် ဟို .. အနောက်ဘက် နာရီစင်ဆီမှ အာဇာ နည်လမ်းအတိုင်း အမိုးပွင့်ဂျစ်ကား နှင့်လင့်ရိုဗာကားအစီး ၂ဝ ခန့်က ကားဦး၌ ငွေငန်းရုပ်များကိုဆင်ယင် ထားပြီး မြို့မငွေငန်းအလှပြယာဉ် ကြီးကို ဦးဆောင်ကာအရှေ့သို့တက် လာသည်။ မီးလုံးရောင်စုံများ၊ အလှ ဆင်မီးဆိုင်းများဆင်ယင်ထားသော ငွေငန်းယာဉ်ကြီးပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်မင်း သားဝင်းဦးက မိုက်ကရိုဖုန်းတိုင်ကို ကိုင်ရင်း သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သီဆို လာသည်။ သီချင်းနှင့်အတူ ဥရောပ ဗုံချက်အသွားဖြင့်တေးသံစုံကိုလည်း ညက်ညက်ညောညောတီးမှုတ်လာလို့ အလှပြယာဉ်ကြီးမှာ စည်းချက်နှင့် အတူ တငြိမ့်ငြိမ့်ဖြင့် ရွေ့လျားမောင်း နှင်လာ၏။
ဗေလုဝ ညင်းသွဲ့သွဲ့မို့ပင် ...
မြို့မအလှပြယာဉ်ကြီး၏ ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ ကားတန်း ကြီးနှစ်တန်းက လမ်းလုံးပြည့်ယှဉ်၍ လိုက်လာကြသည်။ ကားပေါ်ပါလာ သူ ရွှေမန်းသူပျိုပျိုရွယ်ရွယ်အားလုံး ကလည်း ကားအမိုးကိုင်းကို ကျော မှီပြီး အကဲပိုလှစွာဖြင့် အလှပြယာဉ် ကြီးပေါ်က မင်းသားဆီ မျက်နှာမူ ကြသည်။ အလှပြယာဉ်ကြီး၏ဘေး မှာ၊ နောက်မှာ အမိုးဖွင့်ထားသော ကားအမျိုးအစားပေါင်းစုံက အစီး လေးဆယ်၊ ငါးဆယ် အနည်းဆုံးရှိ မှာပေါ့။
ထိုယာဉ်တန်းကြီးက အာဇာနည်လမ်းအတိုင်း မစိုးရိမ်မီးပွိုင့်ကို ကျော်သည်။ ၇၈ လမ်း ဓာတ်ဆီဆိုင်ရောက်တော့ တောင်ချိုးသည်။ မီးရ ထားမဏ္ဍပ်မှာ ခေတ္တခဏဖျော်ဖြေ သည်။ ထို့နောက် လမ်း ၃ဝ အတိုင်း အရှေ့တက်ပြီး ဗထူးကွင်းတောင် ဘက်က ဆောက်လုပ်ရေးမဏ္ဍပ်မှာ လည်း အပြန်အလှန်သီဆိုကြသည်။ ထို့နောက် အရှေ့သို့ဆက်တက်ကာ မန္တလေးတွင်အကနာမည်ကျော်သော ငုရွှေဝါအမျိုးသမီးအလှပြမဏ္ဍပ်သို့ ဝင်တော့ ညသန်းခေါင်တိုင်လုပြီ။ မန္တလေးသင်္ကြန်ပျော်ပရိသတ်ကလည်း မြို့မငွေငန်းအလှပြယာဉ်ကြီးနှင့် နာ မည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦး...။ ထို့ပြင် အစီး ၅ဝ ကျော်နီးပါးကား များဖြင့် ကျိတ်ကျိတ်ခဲအားပေးကြ သည့် ရွှေမန်းသူသည်းသည်းလှုပ် များကို နာမည်ကျော် 'ငုရွှေဝါ' မဏ္ဍပ်မှာ မည်သို့မည်ပုံဆုံကြမလဲ ဆိုတာ အလွန်စိတ်ဝင်စားကြ၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ငုရွှေဝါမဏ္ဍပ်သို့ မြို့မရောက်ရှိမည့်နေ့၊ အချိန်ကို စောင့်စားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ပျို့မောင်ကြီးရေ .. တော့၊
မြန်မာဆန်ဆန်ဆံတောက်များ ဖားလျားချကာ ပိတောက်တွေဝေနေ အောင်ပန်ပြီး သနပ်ခါးပါးကွက် ကျားများဖြင့် မြန်မာဆန်ဆန် ချော မောလှသော 'ငုရွှေဝါ' နှမငယ်တို့ က သီဆိုကပြဖျော်ဖြေသည်။
ကျိတ်ကျိတ်ခဲမျှအားပေးနေသော ပရိသတ်ကြီးက သီချင်းတစ်ပိုဒ်ပြီး တိုင်းပြီးတိုင်း အားပါးတရလက်ခုပ် တီးအားပေးကြသည်။ စာသားသာမ က သံစဉ်ပါ ထူးခြားလှသော သီ ချင်းတွင် 'ငုရွှေဝါ' တို့က လှပညီ ညာစွာ ကပြအသုံးခံသည်။ ထို့ နောက် မောင်ကြီးမြို့မတို့က နှုတ် ဆက်သီချင်းသီဆိုပြီး ထွက်ခွာမည် ဖြစ်သည်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း မြို့မအလှပြယာဉ်ကြီးပေါ်မှ ရုပ်ရှင် မင်းသားဝင်းဦးကို 'ဒီဘက်လှည့်ပြီး သီဆိုဖျော်ဖြေပါဦး' ဟု တောင်းဆို အားပေးကြသည်။
'ငုရွှေဝါ အမျိုးသမီးရေသဘင် အဖွဲ့ကြီး ကျန်းမာပါစေ' ဟု သုံး ကြိမ်သုံးခါနှုတ်ဆက်ပြီး ...
'ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးနှင့် မြို့မ ငွေငန်းအလှပြယာဉ်ကြီး ကျန်းမာပါ စေ' ဟု ငုရွှေဝါနှမငယ်တို့ကလည်း ပြန်လှန်နှုတ်ဆက်ချိန်တွင် မြို့မက နှုတ်ဆက်တေးသွားကိုခပ်ညက်ညက် လေးတီးမှုတ်ပြီး စောစောက ပရိ သတ်ကြီးက သူတို့ဘက်လှည့်ပြီး သီဆိုပါဦးဟု တောင်းဆိုသဖြင့် ရုပ် ရှင်မင်းသားဝင်းဦးက အလှပြယာဉ် ပေါ်မှ မတ်တပ်ရပ်၍ ရှေ့တူရှုရှိ ပရိ သတ်ကြီးဘက်လှည့်ကာ နှုတ်ဆက် သီချင်းကို သီဆိုရင်း ..အလှပြယာဉ် ကြီးကတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားတော့ ၏။
နောက်နေ့နံနက်တွင် မန္တလေး မြို့ထုတ် သတင်းစာ၌ ဆောင်းပါး ရှင်တစ်ဦးက 'မဏ္ဍပ်ပေါ်မှ (ဘောင်း ဘီဖင်ကျပ်အကြောင်း၊ မြန်မာမဆန် သူတို့အကြောင်း၊ သတိပေး ပညာ ပေးသည့်သီချင်းများ သီဆိုကြရာ ဘောင်းဘီဝတ်လာသူကိုဝင်းဦးက သူ့ကိုစောင်းမြောင်းသီဆိုရပါ့မလား ဟု မျက်မာန်ရှကာ အလှပြယာဉ်အ ထွက်တွင် မဏ္ဍပ်ကိုနှုတ်မဆက်ဘဲ တမင်ကျောပေးပြီး ထွက်ခွာသွား ကြောင်း ဤအပြုအမူမှာ အရုပ်ဆိုး ရိုင်းစိုင်းလှပါကြောင်း' စသည့် အ ဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောဆောင်းပါး ကို ရေးသားဖော်ပြပါရှိခဲ့သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ကား ထိုနှစ် သင်္ကြန်တွင် ပရိသတ်အကြားအထူး အသားပေးပြောကြားငြင်းခုန်ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။ ဆောင်းပါးရေးတာမှန် တယ်။ မန္တလေးလို ယဉ်ကျေးမှုမြို့ တော်မှာ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးခွင့်မလွှတ် နိုင်ဟူသော သုံးသပ်မှုမျိုး။ ထိုကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ မင်းသားကြီးက ပရိ သတ်အများစုဘက်လှည့်၍ သီချင်း သီဆိုသဖြင့် မဏ္ဍပ်ကိုကျောပေးသ လိုဖြစ်ရတာပါ။ အဲဒီအချိန် ကိုယ် တိုင်မြင်ရတာပါ' ဟု အတွေ့အကြုံ ဖြင့် ပြောဆိုမှုမျိုး ... စသည်ဖြင့် စီ စီညံခဲ့၏။
မည်သို့ဆိုစေ နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင် မင်းသားမို့ သတင်းဖြစ်သွားတာ သေချာသည်။ မန္တလေးကလည်း တာဝန်ရှိသူမှအစ မြို့သူမြို့သား အားလုံးကလည်း 'ယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်' ဟူသော အနှစ်သာရကို မည်သို့မျှ အပွန်းအပဲ့မခံတာလည်း သေချာသည်။ ထို့အတူ အလွန်ယဉ် ကျေးသိမ့်မွေ့သော ရုပ်ရှင်မင်းသား ဝင်းဦးကလည်း ထိုကိစ္စအတွက် ဆောင်းပါးရှင်၏ထင်မြင်ယူဆချက် လည်း မမှားပါ။ မိမိဝတ်လာသော အဝတ်အစားနှင့်မဏ္ဍပ်မှ သီချင်းတို့ တိုက်ဆိုင်မှုတွင် မိမိစိတ်ကသိက အောက်ဖြစ်ကာ ဤသို့ပြုမူခြင်းဖြစ် လိမ့်မည်ဟု ဆောင်းပါးရှင်က ယူဆ သော်လည်း တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှာမ ဟုတ်ပါ။ မိမိမှာ ပရိသတ်အားလုံး ၏ဆန္ဒကို လိုက်လျောလိုသဖြင့် မိမိတို့အလှပြယာဉ်အထွက်တွင် အများစုပရိသတ်ကြီးအား ဖျော်ဖြေ လို၍ မျက်နှာမူမိရာမှ မဏ္ဍပ်အား ကျောပေးသကဲ့သို့ဖြစ်ရပါသည်ဟု ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦး နှင့် မန္တလေးပရိသတ်မှာ အဝေး ရောက်မိမိအိမ်သားတစ်ယောက် သင်္ကြန်ပြန်လာခိုက် ဝမ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုကြသည့် အမူအကျင့်ပဲဖြစ် သည်။ နောက်နှစ်ကစ၍ မင်းသား ဝင်းဦးကလည်း ချိတ်ပိုးလုံချည်၊ တိုက်ပုံနှင့် ဝတ်စားသီဆိုသည်။ ပရိသတ်ကလည်း ထွေးထွေး ပိုက် ပိုက် စောင့်ရှောက်အားပေးခဲ့၏။ ဆယ်နှစ်ကျော် ဆယ့်တစ်နှစ်တိုင်။
မကြာမီ သင်္ကြန်ကျတော့မည်။ မနက်လင်းသည်မှ မိုးစုပ်စုပ်ချုပ် သည်အထိ ကျုံးလေးဘက်လေးတန် မှာ ကျုံးရေတွေ ဂါလံသန်း ၄ဝ ကျော်သုံးပြီးမွန်းအောင်ပက်ကြမည်။ ၁ဝ ပေနီးပါးမြင့်ပြီး ပေ ၁ဝဝ ကျော် ကျယ်သော စင်ကြီးတွေပေါ်က နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေ ခေတ် အဆန်ဆုံးအဝတ်အစားများဝတ်ဆင် ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် သီချင်းတွေသီ ဆိုကြမည်။ ဘယ်ပရိသတ်ကို ကျော ပေးပေး ကိစ္စမရှိ။ ပရိသတ်ခေါင်း ပေါ်ကစင်မှာ ခြေထောက်တင်၊ ခြေ ထောက်မြှောက်လည်း ကိစ္စမရှိ။ စင် အောက်က ပရိသတ်ကလည်း သူတို့ နှင့်အပြိုင် ဝတ်စားပြီး ခုန်ပေါက်မြူး တူးကြဖို့ပဲဖြစ်သည်။
စည်းချက်ကမြန်၊ ရင်ခုန်သံက မြန်၊ မြန်လွန်းမက မြန်တော့ ပေါက် ကွဲ ...။
Credit: ဆရာဆူးငှက်ရဲ့ Page
Labels: ဗဟုသုတ, ရုပ်ရှင်နှင့် အနုပညာ, သမိုင်းနှင့် မျက်မှောက်ရေးရာကဏ္ဍ
ချစ်တယ် . . . လို့
ဦးမညွှတ်ခဲ့တဲ့ . . . ချစ်ခြင်း ။
မတောင်းခံခဲ့တဲ့ . . .မျှော်လင့်ခြင်း ။
မထွင်းထုခဲ့တဲ့ . . . ကြိုးပမ်းခြင်း . . .
အားလုံးရဲ့ အစုအစည်းနဲ့ ။
ငါ ရှင်သန်ပါရစေ . . . ။
သစ်ရွက်မကြွေဖို့ နွေကို တားဆီးလို့မရ
မိုးစက်မခြွေဖို့ ကောင်းကင်ကို တားဆီးလို့မရ
နှင်းပွင့်မဝေဖို့ ဆောင်းကို တားဆီးလို့မရ
ရနံ့မသင်းဖို့ ပန်းကို ပိတ်ပင်လို့ မရသလိုမျိုး
မြတ်နိုးလွန်းတဲ့ . . . ငါ့ချစ်ခြင်း
ဘာနဲ့ပစ်ခွင်းမလဲ . . .မင်း ။
အငွေ့အသက် . . . အရှိန်အဟုန်နဲ့
( သဘာဝ , တရားက )
အချစ်နဲ့လွတ်ကင်းတဲ့ . . . လူ့ကမ္ဘာ
ဘယ်ဆီမှာမှ . . . မရှိ . . . ။ ။
2009 , Aug , 23
3 : 00 ( p.m )
Credit: ဆရာမောင်လှမျိုး (ချင်းချောင်းခြံ) ရဲ့ Page
Posted by Alex Aung at 2:31 PM No comments:
Credit : ဆီးချို သွေးတိုးနင့်အ၀လွန်ရောဂါကာကွယ်နည်း
Posted by Alex Aung at 6:12 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 10:27 AM No comments:
အုန်းထမင်း နှင့် ကြက်သားဒိန်ချဉ်နှပ် - အုန်းပေါင်းငှက်ပျောသီးကြော် - ကြက်ဆီထမင်း
အုန်းထမင်း နှင့် ကြက်သားဒိန်ချဉ်နှပ် (၄ပွဲ - ၅ပွဲစာအတွက်)
အုန်းထမင်းချက်ရာမှာ ကြက်သွန်နီကြော်လေးထည့်ချက်ရင် ပိုမွှေးပြီး အရမ်းကိုစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ သူနဲ့ တွဲစားဖို့ အတွက် ကြက်သားဒိန်ချဉ်နှပ်လေးကိုပါရေးပေးလိုက်တယ်နော်။ ချက်စားကြည့်နော်။
၁။ ဆန် - ထမင်းပေါင်းအိုးမှာပါသော ဆန်ချိန်သော ခွက်ဖြင့် ၃ ခွက်
၂။ အုန်းနို့ - ၄၀၀ ml
၃။ ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုးမှာပါသော ဆန်ချိန်သောခွက်ဖြင့် ၂ ခွက်
၄။ ကြက်သွန်နီ - အသေး ၄ လုံး
၅။ ကြက်သွန်နီကြော် - ထမင်းစားဇွန်း ၄ ဇွန်း
၇။ သကြား - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၈။ ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ကြက်သွန်နီဥကို အခွံခွာထားပါ။
၂။ ဆန်ကိုထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့် ရေဆေးပြီး အုန်းနို့ ၊ရေ၊ဆား၊သကြား၊ဆီတို့ ကိုထည့်ပြီး သမသွားအောင်မွှေပါ။ထို့ နောက် ကြက်သွန်နီ နှင့် ကြက်သွန်နီကြော်တို့ ကို ထည့်ပြီးထမင်းချက်သလို ချက်ပါ။ ကျက်သွားလျှင် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက်နှပ်ထားပါ။
၃။ အုန်းထမင်းမွှေးမွှေးလေးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
၁။ ကြက်သား - ၅၀ သား (သုို့ ) ၂ ပေါင်
၂။ ဒိန်ချဉ် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
၃။ ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံ ၃ ပုံ
၄။ သကြား (သို့ ) အချိုမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
၅။ ကရဝေးရွက် - ၃ ရွက်
၆။ သစ်ဂျပိုးခေါက် - ၁ ခု
၇။ ဆနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ ၀က်
၈။ အရောင်တင်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ ၀က်
၉။ ငရုတ်သီးမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ ၀က်
၁၀။ ကြက်သွန်နီ - ၃ လုံး
၁၁။ ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၆ ဇွန်း
၁။ ကြက်သားကို ဒိန်ချဉ်၊ ဆား၊ သကြား(သို့ ) အချိုမှုန့်၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ အရောင်တင်မှုန့် ၊ ငရုတ်သီးမှုန့် တို့ ဖြင့် နယ်ရ်ျ အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့် နှပ်ထားပါ။ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးထားပါ။
၂။ ဒယ်အိုးထဲတွင် ဆီထည့်အပူပေးပြီး ဆီပူလာလျှင် ကရဝေးရွက်နှင့် သစ်ဂျပိုးခေါက်ကို ထည့်ရ်ျ မွှေးလာသည်အထိဆီသတ်ပါ။ မွှေးလာလျှင် ကရဝေးရွက်နှင့် သစ်ဂျပိုးခေါက်တို့ ကို ဖယ်ပြီး ကြက်သွန်နီများ နီလာသည်အထိကြော်ပါ။
၃။ ကြက်သွန်နီများ နီလာလျှင် နှပ်ထားသော ကြက်သား ကိုထည့်ရ်ျလုံးပါ။ ပြီးလျှင် ရေထည့်၊ ဆီသတ်ထားသော ကရဝေးရွက်နှင့် သစ်ဂျပိုးခေါက်တို့ ကိုထည့်ရ်ျ ကြက်သားနူးပြီး ဆီပြန်လာသည်အထိတည်ပါ။ ဆီပြန်လာလျှင် အပေါ့အငံမြည်းရ်ျ မီးဖိုပေါ်မှချပြီး အုန်းထမင်းနှင့်တွဲရ်ျ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
လုပ်နည်းကတော့လွယ်ပါတယ် ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ လုပ်စားလို့ ရတယ်။
ကောက်ညှင်းဆန် ၂ခွက် (ထမင်းပေါင်းအိုးထဲကချိန်တဲ့ ခွက်နဲ့ )
ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတပုံ
ခြစ်ပြီးသားအုံးသီးဖတ် ၁ ခွက်
ကောက်ညှင်းဆန် နှင့် ဆား ကို ရေဆေးပြီး ညကတည်းက ရေအမှတ် ၂ အောက်နည်းနည်းလျော့ပြီး စိမ်ထားပါ။ မနက်ကျ၇င် ထမင်းချက်တဲ့ ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး တည်လိုက်ပါ။ ကောက်ညှင်းကျက်ကျက်ချင်းပဲ ခြစ်ပြီးသားအုန်းသီးဖတ် ခွက် သုံးပုံတပုံကို ကောက်ညှင်းထဲေ၇ာရ်ျ အိုးကို ပြန်ပိတ်ပြီး နှပ်ထားပါ။ (အုန်းသီးဖတ်မစားတဲ့ သူတွေ အတွက်ဆိုရင် ကောက်ညှင်းပေါ်မှာ အုံးသီးဖတ် ကို တင်ပြီး နှပ်ထားပါ။ )စားခါနီး မှ အုန်းပေါင်းပေါ်မှာ ကျန်တဲ့ အုန်းသီးဖတ်ကို တင်ပါ။ အ၇မ်းမွှေးတဲ့ အုန်းပေါင်း ပါ။ ငှက်ပျောသီး က ကြော်ခါနီးအထိ မပျော့သေးရင် အခွံမခွာခင် နည်းနည်း လှိမ့်လိုက်ပြီး ကြော်ပါ။
( ၁ ခွက် = 240 ml = ရိုးရိုးကော်ဖီခွက် ၁ခွက်) (ထမင်းစားဇွန်း = 1 tablespoon= 15 ml) (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း = 1 teaspoon=5ml)
ကြက်ဆီထမင်းချက်နည်း မေးထားတဲ့သူများပေမယ့် အခုမှပဲရေးဖြစ်တော့တယ်။ ကြက်ဆီထမင်းကတော့ လူကြိုက်များပြီး စားလို့ ကောင်းတဲ့ အရာတခုပါပဲ။ ဒီနည်းလေးကတော့ လွယ်လဲလွယ်တယ်။ အိစံကတော့ ကြက်သားကို ပြုတ်ထားတာ ဒီတိုင်းမစားချင်လို့ အရသာလေးနယ်ပြီး အိုးပူတိုက်လိုက်ပါတယ်။ စားလို့ ကောင်းပြီး အရသာလဲတူလို့ လုပ်စားကြည့်နော်။
၁။ ၅၀ သားရှိသော ကြက် - ၁ ကောင်
၂။ ဆန် - ပေါင်းအိုးမှာပါသော ဆန်ချိန်သောခွက်ဖြင့် ၃ ခွက်
၃။ ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
၄။ သကြား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
၅။ ကြက်သွန်ဖြူ - ၃ တက်
၇။ ပဲငံပြာရည်အကျဲ - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
၈။ ဂျင်း - လက်တဆစ်
၉။ ကြက်သွန်နီ - ဥ အသေး ၂ ဥ
၁၀။ ဆီ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ဆန်ကိုရေဆေးထားပါ။ ကြက်အရေခွံများကို ခွာထားပြီး ကြက်သားကို အတုံးကြီးကြီးတွေတုံးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကို ထောင်းထားပါ။ ဂျင်းကို အပြားလိုက်လှီးထားပါ။
၂။ အတုံးတုံးထားသော ကြက်သားများနှင့် ဂျင်းအပြားများ၊ ကြက်သွန်နီ ၂ ဥ တို့ ကို အိုးထဲထည့်၊ ရေကို ကြက်သားများ မြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ကြက်ပြုတ်ရည်လုပ်ပါ။ အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ ခန့် တည်ပါ။ ရေကိုထပ်ထပ်ဖြည့်ပေးပါ။ (ကြက်ဆီထမင်းထဲထည့်မည့် ကြက်ပြုတ်ရည်ယူပြီးမှ ဆားအပေါ့အငံထည့်မှာပါ။)
၃။ ကြက်အရေခွံများကို ဒယ်အိုးတခုထဲထည့်ရ်ျ ဆီထွက်လာသည်အထိ လှိမ့်ပါ။ ဆီထွက်လာလျှင် အရေခွံများ ညိုလာပါလိမ့်မည်။ အရေခွံများကို ဖယ်လိုက်ပြီး ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူကို ထည့်ရ်ျ ဆီသတ်ပါ။ ကြက်ဆီထမင်းအတွက်ဆီရပါပြီ။ (ကြက်ဆီထမင်းအတွက် ဆီမှာ ကြက်သွန်ဖြူ အပါအ၀င် ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်းခန့် ရှိရပါမည်။ ၃ ဇွန်း မရှိလျှင် ရိုးရိုးဆီကို ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်နေတုံးထပ်ထည့်ထားပါ။)
၄။ ရေဆေးထားသော ဆန်ကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့်၊ ကြက်ပြုတ်ရည်ကို ထမင်းချက်ရင်ရေထည့်သလောက်ထည့်၊ ချက်ထားသော ကြက်ဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်းထည့်၊ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းထည့်၊ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းကို ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ထမင်းချက်သလိုချက်ပါ။
၅။ ပြုတ်ထားသော ကြက်သားများကို ဆယ်ပါ။ ပြီးလျှင် ကြက်သားများကို ပဲငံပြာရည်အကျဲ ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ခရုဆီ ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း တို့ ဖြင့် နယ်ပါ။ ထို့ နောက် ဒယ်အိုးတခုထဲမှာ ဆီ လက်ဖက်ရည် ဇွန်း ၁ ဇွန်း ကိုထည့်ရ်ျ နယ်ထားသော ကြက်သားများကို ထည့်ပြီး အရည်ခြောက်ပြီး ညိုလာသည်အထိ အိုးပူတိုက်ပါ။ (ကြက်သားများကို အိုးပူတိုက်လျှင် ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပဲအသာလေးလှန်ပေးပါ။)
၆။ ပြုတ်ထားသော ကြက်သားမျာကို ဒီအတိုင်းစားမည်ဆိုလျှင် ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲကို ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊ ကြက်သားမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ ၀က်တို့ ကိုထည့်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် တည်ပြီးမှ ကြက်သားများကို ဆယ်ပါ။ (အိုးပူတိုက်ကြက်သားများကို သုံးမည်ဆိုလျှင် လဲ ကျန်သော ကြက်ပြုတ်ရည်ကို အထက်ပါအတိုင်းထည့်ပြီး ဟင်းရည်ရရန်အတွက် ခဏတည်ပါ။)
၇။ ကြက်ဆီထမင်းပြင်ဆင်ရန်အတွက် ထမင်းကိုအရင်ထည့်၊ ပြီးလျှင် ကြက်သားများကိုခုတ်ပြီးထည့်၊ သခွားသီး၊ အချဉ်ရည်တို့ ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။
၈။ ကြက်ဆီထမင်း အတွက်ဆော့ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင်၊ နံနံပင်အရိုး၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ သံပုရာရည်၊ ကြက်ပြုတ်ရည်အနည်းငယ်၊ ပဲငပိအချိုအနည်းငယ်တို့ ကို ကြိတ်စက်ထဲထည့်ကြိတ်ရ်ျ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Credit: ei sans homemade inspiration
Posted by Alex Aung at 7:39 AM No comments:
Credit: မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန
Posted by Alex Aung at 8:40 AM No comments:
Labels: News and Info, Opinion, Q&A